Kugamuchirwa kuWoopShop.com. Paunenge uchitsvaga kana kutenga kubva kuWoopShop.com, zvako zvakavanzika uye nerako ruzivo zvinodzivirirwa uye zvinoremekedzwa. WoopShop.com inopa ayo akanakisa masevhisi kwauri anoenderana nezaziso, zvirevo, uye mamiriro akatarwa pane ino peji.
• WoopShop.com inoremekedza zvakavanzika zvevashanyi vese kana mutengi webhusaiti uye tora yako yekuchengetedza online zvakanyanya.
• WoopShop.com inounganidza iyo ruzivo inosanganisira yako Email, Zita, Kambani Zita, Kero Yemugwagwa, Post Code, Guta, Nyika, Runhare Nhamba, Pasiwedhi uye zvichingodaro, kutanga, tinoshandisa makuki anodikanwa kuumbiridza uye kuunganidza zvisiri- ruzivo rwunozivikanwa pachako nezvevashanyi vesaiti yedu. Mashoko aya akasiyana newe. Vashandisi vanogona, zvakadaro, vanoshanyira yedu saiti zvisingazivikanwe. Tichaunganidza ruzivo rwekuzvizivisa kubva kune Vashandisi chete kana vakazvipira kuendesa ruzivo rwakadai kwatiri. Vashandisi vanogona kugara vachiramba kupa ruzivo rwekuzvizivisa pachavo, kunze kwekunge rungavatadzise kupinda mune zvimwe zviitiko zvine chekuita neSiti.
• Tinogona kutora ruzivo rwekuzvizivisa kubva kuneVashandisi munzira dzakasiyana siyana, kusanganisira, asi kwete kune, apo Vashandisi vanoshanyira saiti yedu, kunyoresa pane saiti, kuisa odha, kupindura kuongororwa, kuzadza fomu, uye nekubatana nezvimwe zviitiko, masevhisi, maficha kana zviwanikwa zvatinoita kuti zviwanikwe paSiti yedu. Vashandisi vanogona kubvunzwa, sezvakakodzera, zita, email kero, kero yekutumira.
Tinoshandisa ruzivo kutibatsira kuti zvive nyore kuti iwe ushandise, kupindura zvikumbiro kana zvichemo, kutibatsira kuratidza zvakakukoshera uye kukuyeuchidza nezve ruzivo rutsva, zvigadzirwa nekutengesa, makuponi, kukwidziridzwa kwakakosha uye on.
Panguva yekunyoresa kwako, unozokurudzirwa kutipa zita rako, kero yekutumira uye yekubhadhara, nhamba yefoni, uye email kero. Aya marudzi eruzivo rwemunhu anoshandiswa kubhadhara zvikwereti, kuzadzisa mirairo yako. Kana tiine matambudziko kana tichigadzirisa odha yako, tinogona kushandisa ruzivo rwemunhu waunopa kuti tibate iwe.
• Unogona kuzvinyoresa nekushandisa iyo link kubva kune chero email tsamba tsamba kana yako yega kunyorera marongero mushure mekupinda mukati.
Tinogona kuunganidza isiri-yemunhu chitupa ruzivo nezveVashandisi pese pavanosangana neSiti yedu. Ruzivo rwusiri-rwemunhu runogona kusanganisira zita rebrowser, mhando yemakomputa uye ruzivo rwehunyanzvi nezvevashandisi nzira dzekubatanidza kune yedu Saiti, senge iyo sisitimu inoshanda uye nevapi vevashandi veInternet vanoshandiswa nerumwe ruzivo rwakafanana
• Yedu Saiti inogona kushandisa "makuki" kusimudzira ruzivo rweMushandisi, tinogona kushandisa futi yechitatu-bato makuki kubva kuTrustpilot kana chero imwe sevhisi. Mushandisi webhurawuza inoisa makuki pane yavo yakaoma dhiraidhi yekuchengetedza-rekodhi zvinangwa uye dzimwe nguva kuteedzera ruzivo nezve ivo. Vashandisi vanogona kusarudza kuseta yavo yewebhu browser kuramba makuki kana kukuzivisa iwe kana makuki ari kutumirwa. Kana vakadaro, ziva kuti zvimwe zvikamu zveSiti zvinogona kusashanda nemazvo.
• WoopShop inounganidza uye inoshandisa Vashandisi ruzivo rwevanhu pazvinangwa zvinotevera:
Isu tinotora kukokorodza kwakakodzera dhata, kuchengetedza, uye kugadzirisa maitiro uye matanho ekuchengetedza kuchengetedza kusabvumidzwa kuwana, kushandurwa, kuburitswa kana kuparadzwa kweruzivo rwako, zita rekushandisa, password, ruzivo rwekutengesa uye data rakachengetwa paSiti yedu.
• Hatitengese, kutengesa, kana kubvarura Vashandisi ruzivo rwekuzivisa kune vamwe. Isu tinogona kugovera akajairwa akaunganidzwa ehuwandu hwevanhu ruzivo rusina kusunganidzwa kune chero ruzivo rwemunhu ruzivo nezve vashanyi nevashandisi nevatinoshanda navo bhizinesi, vatinotenda navo uye vanoshambadzira nekuda kwezvinangwa zvataurwa pamusoro. Tinogona kushandisa vechitatu-bato vanopa sevhisi kutibatsira isu kushandisa bhizinesi redu uye iyo Saiti kana kutungamira zviitiko isu, sekutumira matsamba enhau kana ongororo. Isu tinogona kugovana ruzivo rwako nevechitatu mapato nezve izvo zvidiki zvinangwa chero iwe watipa mvumo yako.
Vashandisi vanogona kuwana kushambadzira kana zvimwe zvirimo paSiti yedu zvinobatanidza kune saiti uye masevhisi evatinoshanda navo, vatengesi, vashambadziri, vanotsigira, marezinesi uye nevamwe vechitatu mapato. Isu hatidzora zvirimo kana zvinongedzo zvinoonekwa pane aya masaiti uye havazi ivo vane mhosva kune maitiro anoshandiswa nemawebhusaiti akabatanidzwa kune kana kubva kuSiti yedu. Mukuwedzera, aya masayiti kana masevhisi, kusanganisira zvirimo uye zvinongedzo, zvinogona kunge zvichichinja nguva dzose. Aya masaiti nemasevhisi anogona kunge aine yavo yega marongero uye zvakavanzika zvevatengi marongero. Bhurawuza uye kudyidzana pane chero imwe webhusaiti, kusanganisira mawebhusaiti ane chinongedzo kune yedu Saiti, inoenderana neayo webhusaiti zvirevo nemitemo.
Iyi Yega Yakavanzika Policy inotsanangura mashandisiro e data rako wega muApple yekubhadhara masevhisi (Apple inobhadhara). Uye zvakare, iwe unofanirwa kuverenga iyo mamiriro uye mamiriro eApple Pay. Yako bhizinesi zviitiko kuburikidza neWoopShop haina hukama neApple Inc.
• WoopShop ine huchenjeri hwekuvandudza iyi yekuvanzika nguva chero nguva. Tinokurudzira Vashandisi kugara vachiongorora peji ino kuti pave neshanduko kuti vagare vachiziva nezvedu kuti tiri kubatsira sei kuchengetedza ruzivo rwemunhu isu rwatinotora. Unobvuma uye unobvuma kuti ibasa rako kuongorora iyi yekuvanzika nguva nenguva uye nekuziva kugadziriswa.
Nekushandisa ino Saiti, iwe unoratidza kubvuma kwako mutemo uyu. Kana iwe usingabvumirani kune ino mutemo, ndapota usashandise Saiti yedu. Kuenderera kwako kwekushandisa kweSiti zvichitevera kutumirwa kweshanduko kuchirongwa ichi kuchaonekwa sekugamuchirwa kwako neshanduko idzi.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve ino Yakavanzika Sisitimu, maitiro enzvimbo ino, kana zvaunoita newebsite ino, ndapota taura nesu pa support@woopshop.com kana info@woopshop.com
2. Mitemo & Maitiro
• Iwe unomiririra uye waranti yekuti une makore angangoita gumi nemasere kana kushanyira Saiti iri pasi pekutarisirwa kwevabereki vako kana muchengeti. Iwe unozove wega unoita nezvese kuwana uye kushandisa saiti ino nechero munhu anoshandisa password uye chitupa chakapihwa pakutanga kwauri kana kwete kuwana uye kushandisa saiti ino inobvumidzwa newe.
• WoopShop.com inogona kutumira kubva kumatura akasiyana. Zvekuraira zvinopfuura chinhu chimwe chete, tinogona kupatsanura odha yako kuita mapakeji akati wandei zvichienderana nemastock stock nemaonero edu. Ndatenda nekunzwisisa kwako.
Kunze kwekunge zvimwe zvakapihwa kumwe kunhu pane ino peji kana pane ino saiti, chero chinhu chaunotumira kana kutumira kuWoopShop.com, kusanganisira pasina muganho, mazano, kuziva-sei, hunyanzvi, mibvunzo, ongororo, makomenti, uye mazano pamwe chete, kutumira kuchabatwa. sekusavanzika uye kusiri kwepamutemo, uye nekutumira kana kutumira, unobvuma kupihwa marezenisi ekupinda uye kodzero dzese dzeIP dzine chekuita kusasanganisa kodzero dzehunhu dzakadai sekunyora kodzero yeWoopShop.com pasina mubhadharo uye WoopShop ichave isina huripo.
• Iwe haufanire kushandisa e-mail kero yenhema, kunyepedzera kuva mumwe munhu asiri iwe, kana neimwe nzira kutsausa WoopShop.com kana vechitatu-mapato nezvekwakabva chero kutumira kana Zvemukati. WoopSHop.com inogona, asi haizosungirwa kubvisa kana kugadzirisa chero maSevhisi anosanganisira makomendi kana ongororo chero chikonzero.
• Zvese zvinyorwa, mifananidzo, mifananidzo kana mimwe mifananidzo, mabhatani emifananidzo, odhiyo mamodhi, marogo, maslogani, mazita ekutengeserana kana software rezwi uye zvimwe zvirimo pane webhusaiti yeWoopShop.com pamwe chete, Zvemukati, ndezveWoopShop.com chete kana zvirimo zvakakodzera vatengesi. Kodzero dzose dzisina kupihwa zvakajeka dzakachengetedzwa neWoopShop.com. Vanotyora vachatongwa kusvika pamwero wakazara wemutemo.
Ndapota cherekedzai kuti panogona kuve nemimwe mirairo yatisingakwanise kugamuchira uye yatinofanira kukanzura. Mapato ese ari maviri anobvumirana kuti, zvichitevera kutumirwa kwechirongwa, kutakurwa ndiro rega basa rekambani yechitatu-yezvigadzirwa. Pakati peiyi nhanho, muridzi wakazara wechigadzirwa (s) ndewemutengi; zvese zvinosanganisirwa nenjodzi nenjodzi panguva yekufambisa zvinotakurwa nemutengi.
• WoopShop.com inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti ari ewavo uye anoshandiswa nevechitatu mapato. Iwe unobvuma kuti WoopShop.com haina basa nekushanda kana zvemukati zvirimo kana kuburikidza chero saiti yakadaro.
• WoopShop.com inochengetera kodzero yekushandura aya mamiriro uye mamiriro mune ramangwana pasina ziviso.